Achọburu M Ịkwụsị Ife Chineke | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2015
A MỤRỤ YA N’AFỌ 1976
E MERE YA BAPTIZIM N’AFỌ 1991
ONYE Ọ BỤ Martín mụtara eziokwu mgbe ọ nọ n’ụlọ akwụkwọ seminarị. Kemgbe ahụ, o nyerela ọtụtụ ndị aka ha efewe Chineke.
A MỤRỤ m n’ezinụlọ na-ekpesi Chọọchị Katọlik ike. Ha chọkwara ka m bụrụ ụkọchukwu. N’ihi ya, mgbe m dị afọ iri na abụọ, m bidoro ịmụ ihe ọmụmụ atọ. Ọ bụkwa ndị ụkọchukwu atọ kụziiri m ihe ọmụmụ ndị ahụ. N’afọ 1990, mgbe m dị afọ iri na anọ, a kpọrọ m ka m bịa gụọ akwụkwọ n’otu n’ime ụlọ akwụkwọ seminarị kacha mma na Dọminikan Ripọblik.
M bidoro ime nke ọma n’ụlọ akwụkwọ a. Ndị nkụzi anyị gwara m na m jiri aka ahụ m ji, m ga-abụ bishọp. Ma ike ịgụ akwụkwọ ebe ahụ gwụrụ m n’ihi na ha na-akụziri anyị echiche mmadụ, kama ịkụziri anyị ihe Baịbụl kwuru. Ihe ọzọkwa bụ na ndị ụkọchukwu anyị na-akwa iko aghara aghara. E nwedịrị mgbe ha chọrọ idina m n’ike. Ọ bụzi mgbe ahụ ka m chọrọ ịkwụsị ife Chineke.
N’oge ahụ, otu di na nwunye bụ́ ndị ozi ala ọzọ bịara na seminarị anyị nye onye na-ahaziri anyị ego akwụkwọ Ajụjụ Ndị Na-eto Eto Na-ajụ—Azịza Ndị Na-adị Irè. M naara ya akwụkwọ ahụ, si n’isi gụchaa ya. Mgbe m gụchara ya, m kwuru n’obi m, sị, ‘Ọ bụ ihe a ka m na-achọ.’ M pụrụ n’ụlọ akwụkwọ seminarị ahụ, mụ na Ndịàmà Jehova ebido ịmụ Baịbụl. M bidokwara ịga ọmụmụ ihe ha. Mgbe ọnwa asatọ gachara, ya bụ, n’ọnwa Julaị, afọ 1991, e mere m baptizim. M bidokwara ịsụ ụzọ. M mechakwara lụọ Nwanna Nwaanyị María. Yanwakwa bụ ọsụ ụzọ. Kemgbe afọ 2006, mụ na ya bụ ọsụ ụzọ pụrụ iche. Kama ịkwụsị ife Chineke, m na-enyeziri ndị chọrọ ịma onye Chineke bụ aka ka ha fewe ya.